Archive du 20171123
Fifidianana 2018 Miha mazava ny lalana ho an’i Dada
Tafiditra ao anatin’ny fanangonam-baovao sy fijerena ny zava-misy eo amin’ny tontolo politika eto Madagasikara amin’izao fotoana ny vondrona Afrikanina.
Hajo Andrianainarivelo “Sarintsarina demokrasia no misy eto”
Nihaona tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny foibeny teny Ankerana omaly ny antoko Malagasy Miara-Mandroso (MMM) tarihan’i Hajo Andrianainarivelo.
Fanenjehana atao azy any Sainte Marie Namaly bontana i Berija Ravelomanantsoa
Mitohy ny raharaha mampifanolana an’i Berija Ravelomanantsoa, lehiben’ny harena anaty rano sy ny jono any Sainte Marie sy ny manampahefana any an-toerana, ka efa nanakiana mafy azy ny depiote Tsivoulagne Maximin.
Depiote Ratsivalaka Michelle Notoheriko ny fandaniana ny volavolan-dalàn’ny Z.E.S
Depiote niisa 40 tamin’ny 151 izahay no nivory teto amin’ny lapan’i Tsimbazaza ny 08 novambra teo ka niatrika ny fandaniana an’ilay volavolan-dalàna lah.018/2017 du 18/07/17 mikasika ny Z.E.S
Tamin'izany andro izany
Tamin'ny andro fahagola, efa elabe taloha Mbola nilamina ny tany, nahafinaritra tokoa. Tsy nahitana olon-dratsy, tsy dia nisy gadralava Nandry fahalemana, tsy nitebiteby lava.
Olana ao amin’ny MICTSL Toamasina Ahiana hitarika korontana
Mena midorehitra ny tondro rehetra, efa tena mihoatra ny azo leferina ny zava-mitranga momba ny fikirakirana ny kaontenera eo anivon’ny seranatsambon’i Toamasina,
« Permis biométrique » Malagasy Tsy manaja ny fenitra iraisam-pirenena akory
Vehivavy teratany Malagasy fa am-pielezana any Etazonia, mipetraka any Washington DC no sendra olana raha nikarakara “permis” tany an-toerana ity vehivavy nijoro vavolombelona ity. Rehefa vita ny fikarakarana ny antontan-taratasy rehetra hangalana ny “permis” dia nentina tany ihany koa ilay “permis biométrique”
Tondra-drano mandritry ny favaharatra Miara-mitady vahaolana ny BNGRC sy ny minisiteran’ny Atitany
Manodidina ny efatra ireo rivodoza handalo eto amintsika mandritra ny fotoam-pahavaratra.
Tsy fahampian’ny vary Vokatry ny doro tanety sy ny tsy fahampian’ny ranon’orana
Nivoaka tamin’ny fahanginany omaly ny minisitra Chabani Nourdine manoloana ny fanontaniana apetraky ny olona amin’ny fiakaran’ny vidim-bary eny an-tsena. Efa mahatratra 650 Ar mantsy ny iray kapoaka amin’ny vary zanatany toy ny makalioka ankehitriny.
SIF sy ny Transparency International Hijery manokana ireo olana momba ny fananan-tany
Na dia efa in-droa nohatsaraina sy nohavaozina aza hatramin’ny taona 2005 no ho mankaty ny politikan’ny fananan-tany eto amintsika dia tsy misy fiantraikany amin’ny vahoaka ihany, indrindra fa ny fiarovana ny taniny, hoy Raparison Eric, filohan’ny SIF.
Kambana 3 mianadahy maty reny Noraisin’ny Minisiteran’ny mponina an-tànana
Noraisin’ny minisiteran’ny mponina an-tanana ireo zaza kamban-telo vao teraka tany Namakia.
Rotary Club Lac Alaotra Manome lanja ny fanovozam-pahalalana
Manampy betsaka amin’ny fanovozam-pahalalana ny famakiam-boky. Nanolotra boky ny Sekoly tsy miankina INA sy ny Ecole Française lac Alaotra ary ny CHRR Ambatondrazaka no ny Rotary Club Ambatondraka.
Mpivarotra - Tsena COUM 67 Ha “Mila mihaona amin’ny ben’ny tanàna izahay”
Omaly vao maraina tokony ho tamin’ny 05 ora sy sasany dia efa tonga nandrava ny tranovy an’ireo mpivarotra soldes etsy amin’ny Coum 67 ha ireo andian’olona izay voalaza fa voakaraman’ilay tompon’andraikitra iray eo anivon’ity tsena ity, manohana akaiky ireo mpivarotra vaovao kasainy nomena ny toerana. Tohana mafy vokatr’izany ireo mpivarotra “soldes”
Fiaraha-miasan’ny CNAPS – FJKM 141 mianadahy nofanina tany Fianarantsoa
Ho fanarenana ireo tsy nety rehetra teo aloha sy mba tsy hisian’ny fahaverezan-jo intsony amin’ireo mpiasa amin’ny sehatra tsy miankina no nahatonga ny CNaPS sy ny FJKM niara-niasa. Mampiasa olona maro mantsy ny FJKM.
Kitra –Filohan’ny Ligy Matsiatra Ambony Kandida matanjaka i Mamany Gan
Manomboka mafana ny tontolon’ny baolina kitra ary samy mihetsiketsika ireo kandida isan-tsokajiny any amin’ny faritra. Fantatra izao fa kandida amin’ny fifidianana filohan’ny ligy ao amin’ny faritra Matsiatra Ambony i Mamany Gan,
Filohan’ny Baolina kitra any Menabe Mbola hirotsaka ho fidiana ihany koa
Manoloana ny zava-misy any an-toerana eo amin’ny fikasan’ireo olona tsy nifanerasera firy teo amin’ny taranja baolina kitra no mandrisika ahy mbola hirotsaka ho fidiana indray ho filohan’ny ligin’ny baolina kitra any Menabe izay mbola tantanako ankehitriny ,
Manao izay danin’ny kibony amin’ny figalabonana amin’ny harem-pirenena sy ny volam-panjakana ny fanjakana HVM. Tsy misy hery sy fahefahana tena manozongozona azy hatreto, fa manjaka tokana,
Tetikasa “Lamina” hitsinjovana ny manan-kilema Homena loka izay taksibe mendrika
Sokajin’olona manana olana goavana amin’ny fisitrahana ny fiara fitaterana ny olona manan-kilema eto amintsika na an-tanàn-dehibe na ambanivohitra.
“Paramed” eny amin’ny tsy miankina Raisina ho mpiasam-panjakana ireo mendrika
Tsy mandray olona tsy “qualifié” ny eo amin’ny sehatry ny fahasalamana isika, hoy ny minisitry ny fahasamam-bahoaka Malagasy, Lalatiana Andriamanarivo, teny Tsimbazaza omaly alarobia 22 novambra raha niatrika an’ireo depiote nitondra fanazavana mikasika ny valan’aretina pesta izy.
Minisiteran’ny varotra sy ny BNI Hiara-kiasa hitsinjo ireo mpiasam-panjakana
Hiara-kiasa akaiky manomboka izao ny minisiteran’ny Varotra, tarihin’ny minisitra Chabani Nourdine sy ny banky BNI tarihin’ny tale jeneraliny Atoa Alexandre Mey.
Botoubebe Rosin mpandraharaha ara-lodsia “Efa vonona amin’ny fanondranana izahay”
Omaly hariva no nisokatra ny taom-piotazana sy taom-panondrana lodsia amin’ity taona 2017 – 2018 ity ho an’ny faritra atsinanana sy ny faritra Analanjirofo.
Hetsika goavana momba ny tolotra ara-bola Hatao ny 28-29 novambra ny « SMBA »
Hotanterahina ny 28 sy 29 novambra 2017 izao etsy anoloan’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ny andiany voalohany amin’ny hetsika goavana antsoina hoe :
Drafi-panarenana ny fanabeazana Haharitra 9 taona ny fanabeazana fototra
Anisan’ireo minisitra niatrika an’ireo depiote teny Tsimbazaza omaly alarobia 22 novambra ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary ka nitondra fanazavana feno ny amin’ilay PSE (Plan Sectoriel de l’Education) drafi-panarenana momba ny fanabeazana ho tanterahina tsy ho ela eto amintsika.